बालमैत्रि नगरकालागी रामधुनीमा निकृष्ट प्रकारको बालश्रम र बालबिवाह प्रमुख चुनौति ःराष्ट्रिय सहजकर्ता चौबे -
बालमैत्रि नगरकालागी रामधुनीमा निकृष्ट प्रकारको बालश्रम र बालबिवाह प्रमुख चुनौति ःराष्ट्रिय सहजकर्ता चौबे
प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत्र २३, २०७५ समय: १२:२७:२४
झुम्का,चैत्र २३ । रामधुनी नगरपालीकाले बालमैत्रि नगर घोषणाकालागी कार्यक्रमहरु चरणबद्ध अगाडी बढाई रहेका छन् । बालबालिकाको अधिकार सुरक्षित गर्न ल्याएको बालमैत्रि योजनाको बाटो नगर समृद्धिको अवसरको रुपमा रहेको छ ।
अवसरलाई सदुपयोग गर्न सके रामधुनि नगरपालिकाले आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सक्ने छन् । बिकासको दृष्टिमा प्रदेश सरकार केन्द्रितहुने छन् । संघिय सरकारबाट बजेट बिनियोजनमा सोचको परिवर्तन हुन सक्ने छन् । यतिमात्र हैन यसले नगरकै बालबालिकाको बृद्धि बिकास हुन सक्छ ।
यो उपलब्धि प्राप्त हुन सक्ने अवस्था भने सम्भव भए पनि संघर्ष गर्नु पर्ने चुनौति र समस्या पनि छन् । समृद्धि र परिचय स्थापित गर्न सजिलो रहेको छैन् । नगरको केहि वडाहरुमा निकृष्ट बालश्रम र बालविवाहको प्रमुख चुनौतिहरु छन् । गरिबि तथा जनचेतनाको आभवले बालबालिकालाई श्रमगर्न लगाएको छ । अरु स्थानमै पठाएर श्रम गर्न बाध्य बनाउने गरेको छ । गरिबी,अभाव र आवश्यक घरायसी वातावरणको अभावमा आमा बाबुबाट अलग्गिएका बालबालिका निकृष्ट प्रकारको बालश्रम गर्न बाध्य रहेकोे छ । बालमैत्रि नगरकालागी प्राबिधिक सहयोग गरिरहेका राष्ट्रिय सहजकर्ता बिष्णु प्रसाद चौबेले रामधुनी नगरको वडा नं. १ मा निकृष्ट प्रकारको बालश्रम रहेको जानकारी दिए । यसकालागी जनप्रतिनिधिले मिहिन ढंगबाट रचनात्मक रुपमा अगाडी बढ्नु पर्ने आवश्यक्ता रहेको बताउछन् ।
त्यसैगरी वडा नं. ९,वडा २, वडा ४ मा बालबिवाहको चुनौति रहेको चौबेले बताए । मुसहर समुदायमा सानै उमेर बिवाह गर्ने चलन भएकोले यो समस्या प्रमुख रुपमै रहेको जानकारी दिए । ९ वटै वडामा सरोकारवालाहरु संगको बालमैत्रि सुचक सरलिकरण गर्ने क्रममा राष्ट्रिय सहजकर्ता चौबेले सो समस्याबारे जानकार भएको बताए ।
समस्या चुनौति पुर्ण रहेको भएपनि असम्भव भने नरहेको बताए । लटरपटर जंगबहादुरको चटनी जस्तो होईन चौबेले भने निरन्तर सकृयता पुर्वक योजनाबद्ध रुपमा लाग्नु पर्ने अवस्था रहेको सुझाव दिए । बालश्रममा रहेका बालबालिकाको खोजी, नियमित अनुगमन, उद्धार र पुनःस्थापनालाई सँगसँगै लैजानुपर्छ । बालबालिकालाई श्रम गर्न निषेध गर्ने मात्र नभई उनीहरू के कारणले बालश्रम गर्न बाध्य छन् भन्ने कुराको पहिचान हुनुपर्छ र त्यो कारणलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । बालश्रमको जोखिममा रहेका बालबालिकाको पहिचान गर्नुपर्छ । सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा अभिभावक र समाजलाई यसबारे सचेत गराउनु पर्ने बताए । बालबालिकालाई श्रमबाट मुक्त गरेर विद्यालयमा भर्ना गर्ने, पठनपाठनको वातावरण मिलाउने र सहयोग गर्नेतर्फ प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । जीवन निर्वाहका लागि जेसुकै श्रम गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका बालबालिकालाई पठनपाठन र मनोरञ्जन गर्ने वातावरण प्रदान गरी उनीहरूको भविष्य उज्ज्वल बनाउने अवसर प्रदान गर्नु स्थानियतह सङ्घ संस्था, समाज र प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य भएको चौबेले आफनो धारणा ब्यक्त गरे ।